Wasaarada gaashaandhiga DKMG oo digniin u jeedisay ciidanka Dowladda | raascasayrmedia.com
← Wax garadka gobolka Raascasayr oo baaq iyo talooyinba ka soo saaray dagaalada ka soconaya magaalada caasimada ah ee Muqdisho
Shabaab oo Baydhabo ku qab qabtay dad ka ganacsanaya qaadka →
Wasaarada gaashaandhiga DKMG oo digniin u jeedisay ciidanka Dowladda
Wasaarada gaashaandhiga dowladda KMG Soomaaliya ayaa digniin u jeedisay ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyadoo dhinaca kale ugu baaqday in ay hubka kala fogaadaan dadka shacabka ah.
Wasiirka gaashaandhiga Xukuumada KMG Soomaaliya C/xakiin Xaaji Max’uud Fiqi oo maanta sida uu sheegay kormeer ku tagay xarunta Jasiira oo ay ku suganyihiin ciidamo ka tirsan dowladda KMG ayaa waxa uu ciidamada dowladda uga digay in ay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho, isagoo shaaca ka qaaday in looga baahanyahay ciidamada in ay dadka wax u qabtaan oo aysan dhibaateyn.
C/xakiin Xaaji Max’uud Fiqi waxa uu ugu baaqay ciidamada dowladda ee hubka ku dhex sita wadooyinka Magaalada Muqdisho in ay tagaan furumaha dagaalka oo aysan hub ku dhex qaadan degmooyinka ay dowladu gacanta ku heyso.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka waxa uu sidoo kale ugu baaqay ciidamado in ay sii wadaan dagaalada dowladdu ay kula jirto xarakada Al Shabaab.
Baaqaani ka soo baxay wasiirka gaashaandhiga ee ku aadan in ciidamada dowladdu dadka aysan dhibaateyn ayaa ku soo beegamaya xili dowladda oo dagaal ku jirta ciidamadeeda lagu eedeeyo in dhibaatooyin kala duwan ay u geystaan dadka shacabka ah.